भारतबाट आउने महिलालाई तत्काल नागरिकता दिनुपर्छ : डा. कोइराला | भारतबाट आउने महिलालाई तत्काल नागरिकता दिनुपर्छ : डा. कोइराला – हिपमत
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री डा.शशांक कोइरालाले भारतबाट विवाह गरेर आउने महिलालाई तत्काल नागरिकता दिनुपर्ने माग राखेका छन् ।
टेलिभिजन कार्यक्रम ‘जनता जान्न चाहन्छन्’मा पत्रकार ऋषि धमलासँग शुक्रबार कुरा गर्दै डा.कोइरालाले बिहे गरेर आउनेवित्तिकै विदेशी महिलालाई नागरिकता दिनुपर्ने बताए । उनले विदेशी महिलालाई नागरिकता दिँदैमा नेपाललाई फिजी बनाउन नसकिने बताए ।
‘विदेशी महिलाले विवाह गरेर आइसकेपछि आफ्नो नागरिकता बुझाइसकेको छभने विदेशी बुहारीलाई नागरिकता दिन केको आपत्ति र?’, उनले प्रतिप्रश्न गर्दै भने, ‘अरु (भारत)को हामीले किन फलो गर्ने ? हाम्रो आफ्नै हुनु पर्यो नि ।’